Tuugo si la yaab leh u xadday beer ku taalla Jarmalka | WAJAALE NEWS
Tuugo si la yaab leh u xadday beer ku taalla Jarmalka
October 4, 2018 - Written by Reporter:
Tuugada ayaa la baxsatay dhammaan midhihii canabka ee beertaas ku yaallay “iyagoo adeegsanayay mishiin casri ah oo mar qudha wada xaalufinayay dhammaan midhaha beerta”, sida uu booliska ka soo xigtay wargeyska maxalliga ah ee lagu magacaabo Rheinpfalz.
Arrinta ugu weyn ee ka cadheysiisay booliska ayaa ah xaqiiqada ku saabsan in beertaas ayna ku oollin meelaha ugu muhiimsan ee magaalada, hase ahaatee waxay ku taallay meel u dhow goob gawaadhida la dhigto oo ka baxsan xaafadda Deidesheim.
Wakhtigaas ayay ugu suurta gashay iney wada goostaan midhaha beerta oo culeyskoodu uu gaadhayay 1,600 oo kiilo.
Midhaha canabka cad cad ee ay xadeen ayaa ah kuwa loo adeegsado sameynta nooc ka mid ah khamriga, waxaana qiimahooda uu ku kacayaa lacag ka badan $9,000 oo doollar.
Sannadkii la soo dhaafay oo kaliya ayaa la xaday midho canab oo dhan 600 ilaa 800 oo kiilo.
Stephan Altmann oo ka mid ah dadka deggan gobolkaas ayaa yidhi “Arrintan waxaa sabab u ah tartanka iyo kala maseyridda u dhaxeysa shirkadaha”.